Ajọ Ifufe Irma na-aga n'ihu na-aga North Florida, ụdị ya dabara na 1 | Network Meteorology
Claudi ego | | Ajọ Ifufe
Irma na njem ya na Florida ugbu a
Obodo mmiri tochiri, ihe karịrị nde ụlọ 3 na-enweghị ọkụ eletrik na ọtụtụ mmebi, bụ ụzọ okporo ụzọ Hurricane Irma hapụrụ n'okporo ụzọ ya. Ugbu a downgraded na udi otu, ifufe ya na-aga n'ihu karịa 150km / h, ma ọ bụ naanị na ọkara ugwu nke steeti Florida.
N'ime awa ole na ole sochirinụ, a na-atụ anya na Irma ga-aga n'ihu n'akụkụ ọdịda anyanwụ nke Florida, na-aga North mgbe niile. A na-atụ anya na ọ ga-adaba na ndịda ọwụwa anyanwụ United States, ebe ọ ga-efunahụ ike. Ozugbo anya oke ifufe ahụ dị na mpaghara ndịda Georgia ma ọ bụ ka dị na mpaghara ugwu nke Steeti Florida na-atụ anya na ọ ga-aga n'ihu ruo nwa oge, ma bụrụ oké mmiri ozuzo na-ekpo ọkụ.
Nsonaazụ na edemede ya
Ndị na-enweghị ọkụ eletrik na steeti Florida na-anọchite anya 35% nke ngụkọta nke ndị ahịa debanyere ọrụ eletrik. N'ime ógbè, ndị ọrụ kacha njọ bụ Monroe, na he na 83% nke ebe. Miami-nna, ebe ndị ọzọ kachasị ewu ewu ebe Irma ga-agafe, hapụrụ 81% na-enweghị ike, ógbè kachasị n'ọnụ ọgụgụ na Florida. Robert Gould, osote onye isi nke otu ụlọ ọrụ na-ahụ maka ịba uru, kwuru na ọ ga-ewe ọtụtụ izu iji weghachite na rụkwaa ọkụ niile.
A na-atụ anya nyocha a pụrụ ịdabere na ya banyere mmebi kpatara taa. Emeghi ya tupu oge eruo n'ihi enweghị ike nke ndị otu nzọpụta ịbịaru mpaghara ahụ nso. O nwere ike ịbụ na ọnụ ọgụgụ nke ihe onwunwe na mmebi mmadụ nwere ike ịrị elu. Enwere ike ikwenye ya mgbe ajọ ifufe ahụ gafere kpamkpam. Ọnụ ọgụgụ ndị nwụrụ na Florida dị ugbu a na 3, na-agbakwunye 29 na njem ha site na Caribbean.
Hasda abanyela na nkwupụta nke oke ọdachi na Florida, na-eme ka o doo anya na ọ ga-aga ebe ahụ n'oge na-adịghị anya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe gbasara ihu igwe » Ajọ Ifufe » Ajọ ifufe Irma na-aga n'ihu na-aga na North Florida, ụdị ya dabara na 1
Na-eto n'ọzara? Ọ bụghị echiche nzuzu, ọ bụ ihe a na-eme ugbu a